Sida "wax loo baro" macmiilka ku saabsan naqshadeynta garaafka | Abuurista khadka tooska ah
Sida "wax loo baro" macmiil ku saabsan naqshadeynta garaafka
Mararka qaarkood naqshadayaasha qaarkood waxay u adeegaan macmiilkooda iyagoo u maleynaya inuu horeyba u ogaa waxa naqshaddu ku saabsan tahay; si kastaba ha noqotee iyo inta badan, macmiilku ma oga waxa naqshadeeyaha ka hadlayo tanina badanaa waxay keentaa ismaandhaaf, maadaama ficil ahaan loola hadlayo macmiilka sida haddii dhammaan macluumaadka ay yihiin wax maalin kasta isaga u eg oo uu iloobo inay qaadanayso 4-5 sano jaamacad in lagu barto naqshadeynta garaafka
Soo Koobid, nashqadeeyayaashu waxay rabaan macaamiishooda inay fahmaan dhammaan isla mar ahaantaasna waxay u maleynayaan inaysan waxba ka aqoon naqshadeynta, marka halkan waxaan ku siineynaa dhowr talooyin oo aad ku wanaajineyso adeegga macaamiisha, markaa fiiro gaar ah u yeelo.
Sidee loo "bartaa" macmiil si ay u ogaadaan waxa naqshadeynta garaafku ku saabsan tahay?
1 Ka fikir in macmiilku uusan waxba ka aqoon naqshadeynta
2 Gali "adduunka" macmiilkaaga oo kasbo kalsoonidooda
3 Go'aamiso ujeeddada mashruuca
4 Waxbar macmiilka
Ka fikir in macmiilku uusan waxba ka aqoon naqshadeynta
Laga soo bilaabo marka macmiilku codsado miisaaniyadda, isku day inaad caddeyso wixii su'aalo ah si aad u ogaato waxa aad rabto. Baadhitaan ku samee haddii macmiilku runti sheegayo waa waxa ay doonayaan inay sheegaan ka dib markaad fahanto ujeedka macaamilku wuxuu yahay, waa waqtigii si dhab ah loo fahmi lahaa macmiilka laftiisa.
Gali "adduunka" macmiilkaaga oo kasbo kalsoonidooda
Caadi ahaan nashqadeeyayaasha qaar amni xumo awgeed. bilaw mashruuca dhicis in la isku dayo in la "cajab galiyo", si kastaba ha noqotee, tani guud ahaan waxay u keentaa amni darro macaamiisha.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u fahamto waxa uu macmiilku u baahan yahay, suuqa ay ku jiraan, tartankooda, luqadda uu inta badan adeegsado, iwm. dhaqso ayaad ku kasban kartaa kalsoonidooda. Sidan oo kale, waad ku qancin kartaa isaga oo ka dhigi kartaa inuu diyaar u yahay inuu barto waxa lagama maarmaanka u ah naqshadeynta inta lagu jiro nidaamka daryeelka / abuurista.
Go'aamiso ujeeddada mashruuca
Macaamiisha inta badan waxay leeyihiin fikrado badan, si kastaba ha noqotee, oo ku qanacsan fikradooda qaabka mashruuca, waxaa laga yaabaa inay si fiican u quustaan ​​ama ay aad ugu sii faraxsanaadaan, maadaama ujeeddada mashruucu waxay ku lug leedahay go'aamintaSi kale haddii loo dhigo, ka hor inta aan la bilaabin, waxaa lagama maarmaan ah in la dejiyo mashruuca la horumarinayo; waa maxay ujeedkaagu; waa maxay tixraacyadaadu; muddada ay tahay in lagu fuliyo; sida loo geyn doono; yaa ka masuulka ah oo sida muuqata u cad qarashka ugu dambeeya.
Xirfadle ahaan, waxbarida macaamiisha waa masuuliyada nashqadeeyaha, iyadoo la siiyay in macmiilku uusan lahayn waajibaad ah inuu wax uun ka ogaado dunidan iyo dhowr jeer, runti waxba kama oga naqshadeynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida "wax loo baro" macmiil ku saabsan naqshadeynta garaafka
Waa maxay naqshad? Waa wax inaga caawin kara nolosheena
Sida looga saaro ama loo dhigo taariikh hore sawir ku yaal Photoshop